E14 X555-54 High lobushushu Resistance sesitovu Lamp Holder - China Haimen Xinrong Electric
E14 X555-54 High lobushushu Resistance sesitovu Lamp Holder
Haimen co xinrong zombane., Ltd ezizodwa ekuveliseni iintlobo ezahlukeneyo lomnini isibane lezonka, esetyenziswa eziko igesi, oveni yombane, eziko umphunga ecocekileyo, lezonka umphunga njalo njalo. Lo mfanekiso ubonisa imveliso yethu yakutshanje: i E14 oven isibane ubenikwe X555-54 series lwahlulwe ngokwendidi ezintathu: X555-54H, X555-54V kunye X555-54X.They abe neempawu yokunganyangeki aphezulu obushushu. efektri yethu iye yaluphumelela ISO: 9001: 2000 kwezatifiketi inkqubo esemgangathweni, imveliso iye CE, ROHS kunye othe ...
Haimen co xinrong zombane., Ltd ezizodwa ekuveliseni iintlobo ezahlukeneyo lomnini isibane lezonka, esetyenziswa eziko igesi, oveni yombane, eziko umphunga ecocekileyo, lezonka umphunga njalo njalo. Lo mfanekiso ubonisa imveliso yethu yakutshanje: i E14 oven isibane ubenikwe X555-54 series lwahlulwe ngokwendidi ezintathu: X555-54H, X555-54V kunye X555-54X.They abe neempawu yokunganyangeki aphezulu obushushu. efektri yethu iye yaluphumelela ISO: 9001: 2000 kwezatifiketi inkqubo esemgangathweni, imveliso iye CE, ROHS kunye nezinye isatifikethi, siya ngokunyanisekileyo sikhangele phambili abarhwebi basekhaya angaphandle ukubuza, ukwenza ii-odolo OEM kunye ODM. Ngaxeshanye, siye years-20 yamava kwishishini lezonka, ukuze sibe nokuqonda ngokunzulu imveliso zoshishino, uphuhliso lwemveliso ukusebenza.
E14 220-240V 15 / 24W sesitovu Iqhubu
250 Indoda Terminal 90 ℃
yodongwe Lamp Holder
Imilinganiselo Lilonke (㎜)
250 Indoda Terminal 180 ℃
250 Indoda Terminal 45 ℃
Previous: E14 X555-43 sesitovu Lamp jiko eziBengezelayo Zamacebo Okufaka Holder Ubushushu High umkhumbi Microwave
Next: E14 X555-54G Round sesitovu Lamp Holder sesitovu Light Lokulinganisa
Round Head E14 Holder Sale
Round sesitovu Lamp Holder Sale
Round sesitovu Light Holder
Round sesitovu Light Holder Sale
Ihowuliseyili Round sesitovu Lamp Holder
E14 X555-80H Round sesitovu Light Holder T300 Halogen
G9 WGB-A okoxande sesitovu Lamp jiko eziBengezelayo T300 ...
E14 X555-58 umkhumbi Light Holder Ceramics ngethua ...
E27 X666-80H sesitovu Lamp Holder T300 E27 umkhumbi ...
G9 WGB-A sesitovu umkhumbi Lamp Holder CE T300 High ...
G9 WGA-40 umkhumbi sesitovu Lamp Holder Cover Certified